10/01/2011 - 11/01/2011 ~ The Light of Truth
Thursday, October 20, 2011 The Light Of Truth No comments
ထိုအခါ ယေရှုနှင့် ပါသောသူ တယောက်သည် လက်ကိုဆန့်၍ ထားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် နားရွက်ပြတ်လေ၏။
ယေရှုကလည်း သင့်ထားကို သူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့ ထားကိုကိုင်သောသူ ရှိသမျှတို့သည် ထားဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။
ယခုပင်ငါ့အဘကို ငါ့တောင်းနိုင်သည်ကို၎င်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင်တမန်တဆယ်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့စေလွှတ်တော်မူမည်ကို၎င်း၊ သင်သည် မထင်သလော။
သို့ဖြစ်လျှင် ဤသို့သောအမှုအရာ တို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟူသောကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ ပြည့်စုံအံ့နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၆း၅၁-၅၄၊ ယောဟန် ၁၈း၁၀-၁၁)
ဒီကျမ်းပိုဒ်မှာ အခြေအနေတစ်ခုကို တုန့်ပြန်ပုံများတွေ့ရတယ်။
ပေတရုက သခင်ယေရှု ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ကောင်းစွာ သိထားသူပါ။
(မသဲ ၁၆း၁၆။ ရှိမုန်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင် တော်မူသောဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော် မူသည်ဟု လျှောက်လေ၏။)
ဒီနေရာမှာ ပေတရုက အကောင်းဆုံးကို တုန့်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှုက ငါ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါအကူအညီတောင်းရင် ဘုရားသခင်က ငါ့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်က ဒီလိုလုပ်ရမယ့်အချိန် မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုရားသခင်အလိုတော် ဘယ်လိုပြည့်စုံတော့မှာလဲ လို့ ပြောခဲ့တယ်။
သခင်ယေရှုက ခြေအနေပေါ်မှာ ဘုရားအလိုတော်ကို နားလည်ပြီး ဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကိုသာ တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပေတရုက ကိုယ့်အလိုပြည့်စုံဖို့ကိုသာ ကြည့်ပြီး တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။ သခင်ယေရှုကတော့ ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ ကျမ်းစာပြည့်စုံဖို့ကို ဦးစားပေးတုန့်ပြန်ခဲ့တယ်။
အခြေအနေက အလွန်ဆိုးရွားနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်မှာ သင်ဘယ်အရာကို ရွေးချယ်တုန့်ပြန်မလဲ။
ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ဘုရားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲ ဆိုတာကို သိဖို့အရေးကြီးတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်တွေ့ကြုံနေတဲ့အခြေအနေမှာ ဘုရားဘယ်ရောက်နေသလဲလို့ ခံစားမိတတ်တယ်။ ဘုရားသခင်ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ဆိုတာကို နားလည်မှုလွဲသွားရင် တုန့်ပြန်မှု မှားသွားနိုင်တယ်။ အခုခဏတွေ့ကြုံရင်ဆိုနေရတာတွေဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်။ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေသောအရှင် ဘုရားသခင်က ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ သေချာမသိနိုင်သေးခင် လှပတဲ့ ဘ၀အခြေအနေတစ်ခုကိုမမြင်တွေ့နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ သခင်ယေရှု ဂေသရှေမန်မှာ ကြုံတွေ့နေရတာက သူ့ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်နေတယ်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ ကယ်တင်ခြင်း အကြံအစည်အတွက် ဒီအခြေကို ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လေ။
ဒါကြောင့် သင့်ဘ၀မှာလည်း တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေများကို မှန်ကန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့
၁။ ဘုရားသခင်အပေါ် လုံးဝအပြည့်အ၀ ယုံကြည်ရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကျိုးအတွက်သာ အမှုခပ်သိမ်းကို ဘုရားသခင်က ကြုံတွေ့စေနေတာပါ။
( ရောမ ၈း၂၈ ဘုရားသခင်ကိုချစ်သော သူတည်းဟူသော ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏ အကျိုးကိုခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်း ပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏။) ဒါကို မယုံရင် မေးခွန်းတွေ ထုတ်တတ်လာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အကျိုးအတွက် တစ်ခုခု ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိထားပြီး သီးခံနိုင်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ အချိန်ကိုက် ပြုလုပ်နေခြင်းကို စိတ်ရှည်သီးခံခြင်းနဲ့ စောင့်နေတတ်ဖို့လိုတယ်။
(ယာကုပ် ၅း၁၁ သည်းခံနိုင်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏။ ယောဘသည် သည်းခံကြောင်းကို သင်တို့ကြားရကြပြီ။ ထာဝရဘုရား သည် မိမိအမှုကို လက်စသတ်တော်မူရာမှာ အလွန်သနားစုံမက်တော်မူကြောင်းကိုလည်း သိမြင်ကြရပြီ။)
၃။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို ခံယူပါ။
ငါ့လောက်ခက်ခဲနေတာ ငါပဲ ရှိတယ်လို့ သင်ပြောနေချိန်မှာ လူတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ လမ်းပြမှု ကို သိနားလည်မှ မှန်ကန်သော တုန့်ပြန်မှုကို တုန့်ပြန်နိုင်မယ်။ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ပြီး တုန့်ပြန်နိုင်ဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖွင့်ပြခြင်း လမ်းပြမှုကို သိနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
(ယောဟန် ၁၆း၁၂-၁၃ သင်တို့အား ငါပြောစရာစကားအများရှိသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ယခုမခံနိုင်ကြ။ သမ္မာတရား နှင့် ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည် ရောက်လာသောအခါ၊ သမ္မာတရားကို သင်တို့အား အကြွင်းမဲ့ သွန်သင် ပြသလိမ့်မည်။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဟောပြောမည်မဟုတ်။ ကြားသမျှ တို့ကို ဟောပြောလိမ့်မည်။ နောင်လာလတံ့သောအရာတို့ကိုလည်း သင်တို့အားဘော်ပြလိမ့်မည်။ ၁၄ထိုသူ သည် ငါ့ဘုန်းကို ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍ သင်တို့အား ဘော်ပြ လိမ့်မည်။ ၁၅ခမည်းတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သမျှသည် ငါနှင့်စပ်ဆိုင်၏။ ထိုကြောင့် ငါနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာ ကိုယူ၍ သင်တို့အားဘော်ပြလိမ့်မည်ဟု ငါပြော၏။)
သင်မရမက ဖက်တွယ်ထားတဲ့ သင့် ယူဆချက် အထင်အမြင်တွေကို စွန့်လွတ်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံခိုနားပါ။
သင့်အခြေအနေများကို မှန်ကန်စွာ သိမြင်နားလည်လာပြီး မှန်ကန်သော ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်လာပါမယ်။
ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းအာနုဘော်၌ စံပယ်တော်မူသော စည်းစိမ်ရှိ သည်အတိုင်း၊ သင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကို ယေရှုရစ်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်။ ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။
အာမင်။ (ဖိ ၄း၁၉-၂၀)
ရှင်ပေါလုက ငါ၏ဘုရားသခင် လို့ ပြောထားတယ်။ သူဒီစကားပြောတဲ့အချိန်က ထောင်အကျဉ်းချ အဖမ်းခံနေချိန်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီစကားကို ပြောနိုင်တာလဲ။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ရှေးဘိုးဘေးတို့ကို ကယ်တင်သောဘုရားက သူ့ကိုလည်း ကယ်တင်သောဘုရား၊ သမ္မာကျမ်းစာထဲက ဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာပဲရှိတဲ့ဘုရား
မဟုတ်ဘူး။ သူ့အသက်တာထဲမှာ အတူပါရှိသောဘုရား၊သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားအဖြစ် သိရှိထားလို့ ဒီလိုပြောနိုင်တာပါ။
တစ်ခါတုန်းက ရှင်ပေါလုနဲ့ သိလတို့ အဖမ်းခံရသေးတယ်။ ထောင်ထဲမှာ စိတ်ပျက်မနေဘဲ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဆုတောင်းလိုက်တာ ထောင်တံခါးတွေ ပွင့်၊ အချည်အနှောင်တွေကလွတ်ခဲ့တာကို သူမေ့အုန်းမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ရှင်ပေါလု ထောင်ကျနေတာ သူဆုမတောင်းလို့လား။ ဘုရားသခင်အတူမပါရှိလို့လား။ အသက်တာမှာ ဘုရားနဲ့ မှန်ကန်တဲ့သူ၊ သမ္မာတရားမှာ ရပ်တည် အသက်ရှင်သူပါ။ ဒါပေမယ့် သူအခု ထောင်ကျနေရပြီလေ။
အသက်တာမှာ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ရှင်ပေါလုလိုမျိုး ဒုက္ခ အခက်အခဲ ပြသနာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အသက်တာမမှန်လို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ကြုံခိုင်းတာလဲ လို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်တတ်ကြတယ်လေ။ ရှင်ပေါလုကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။
ဖိ ၄း၁၉-၂၀ လို့ ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ သင်ကော ရှင်ပေါလုလို ပြောနိုင်မလား။
အရေးကြီးတာက အသက်တာမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ ဆုတောင်း ချီးမွမ်းနေနိုင်ဖို့ပါပဲ။
ခါနန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင် သခင်ယေရှုဆီလာတော့ မင်းအတွက် ငါလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ သခင်ယေရှုက သူ့ကို ငြင်းခဲ့သေးတယ်။ ခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ အပြောလည်း ခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကတော့ စိတ်မပျက်ဘူး။ သခင်ယေရှုအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ ဆက်လက်အားကိုး တောင်းဆိုနေတာပဲ။ အဲဒီအခါကြတော့ သခင်ယေရှုက မသဲ ၁၅း၂၈လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင် ငါ့ကို မေ့နေပြီ။ ငါ့ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ ခံယူပြီး ယုံကြည်ခြင်းလျော့ကာ ဘုရားကို အားကိုးချင်စိတ်ကုန်သွားတတ်ပြန်တယ်။
ဗာတိမဲ ဆိုတဲ့ မျက်မမြင် သခင်ယေရှုဆီချဉ်းကပ်တော့ တားဆီးခြင်းခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မလျော့ဘဲ ဆက်လက်တောင်းဆိုတော့ သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ခွင့် ရပြီး မျက်စိပြန်မြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ အတားအဆီးတွေ ကြုံရရင် လက်လျော့တတ်ကြပြန်တယ်။
ဘုရားသခင်နဲ့ မှန်ကန်စွာ အသက်ရှင်ပါလျက်နဲ့ ဘေးဒုက္ခ ကြုံတဲ့အခါ . ..
ဘုရားသခင်ဆီဆုတောင်းနေပေမယ့် ဘုရားသခင်ဆီက အဖြေမရ လျစ်လျူရှုထားသလို ခံစားလာရတဲ့အခါ.......
ဘုရားသခင်ဆီ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရာမှာ အတားအဆီး အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ ......
ဘုရားသခင်အပေါ်ထားတဲ့ သင့် သဘောထား၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ဆန္ဒ က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။
ရှင်ပေါလုလို ငါ၏ဘုရားသခင်လို့ သင့်ဘ၀မှာ ပြောနိုင်ဖို့ အထက်ပါ လူသုံးယောက်ဆီက သင်ခန်းစာ ယူရင်း ဘုရားသခင်ကို ဆက်လက်ပြီး အားကိုးယုံကြည် အသက်ရှင်သွားကြပါစို့လား။
Friday, October 14, 2011 The Light Of Truth No comments
သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အမှန်တကယ် သေဆုံးခဲ့ခြင်းမရှိ။ မေ့မြောနေ ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အနာ ကျက်စေသော လိမ်းဆေးဆီ မွှေးနှင့် နံ့သာမျိုးတို့ဖြင့် လိမ်းကျံကြ၏။ မေ့မြောနေရာမှ သတိရပြီး ဒဏ်ရာများ ပျောက်ကင်းသွား ချိန်တွင် သခင်ယေရှုသည် ဥယျာဉ်စောင့် အသွင်ရုပ်ဖျက်၍ သင်းချိုင်းတော်မှ ပြောင်းရွှေ့တော်မူခြင်း ခံရလေသည်။ သူ၏ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းမှာ အခြားမဟုတ် မေ့မြောရာမှ ပြန်လည် သတိရလာ ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဟု စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ တစ်ချို့ကလည်း သခင်ယေရှုပြန်ရှင်လာသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ တပည့်တော်တို့၏ စိတ်အာရုံအတွင်း၌ စွဲလမ်းမှု အာရုံမှားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ တစ်ချို့က ဤဖြစ်ရပ်သည် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်မျှသာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် အမှန်တကယ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်း မရှိဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လှည့်ဖြားခြင်းသက်သက်လား။ အမှန်ဖြစ်ရပ်လားဆိုသည်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်လာပေသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ကြိုတင်စကားများ သခင်ယေရှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများ၌ ကြိုတင်ပြောထားသောအရာများသည် သခင်ယေရှု၏ သက်တော်စဉ်၌ ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ ပရောဖက်ကြီး ဟေရှာယသည် သခင်ယေရှုမမွေးမီ ဘီစီ၇၀၀ကျော် ကပင် ကြိုတင်ပြောထား သောစကားမှာ " ထို့ကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် နိမိတ်လက္ခဏာကို သင်တို့ အား ပေးတော်မူမည်။ ကြည့်ရှုလော့။ သတို့သမီးကညာသည် ပဠိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လတ္တံ။ (ဟေရှာယ ၇း၁၄)" ဟု ဟောပြောခဲ့သည့် အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် အပျိုစင်မာရိအားဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူခဲ့ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ ထို့ပြင် မိက္ခာ၅း၂အတိုင်း သခင်ယေရှုသည် ဗက်လင်မြို့၌ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ကြောင်းနှင့် မာလခိ ၃း၁ တွင် ဟောပြောခဲ့ သည့်အတိုင်း နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန် ပေါ်ထွန်းခဲ့လျက် ခရစ်တော်အတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့ ကြောင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ (မဿဲ၂း၁၊ ၃း၁) ထပ်မံလေ့လာမည်ဆိုပါက တခြားအကြောင်း အရာများစွာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အထူးပြုဖေါ်ပြလိုပါ သည်။ ယောဘ၊၁၉း၂၅ တွင် " ငါ့ကို ရွေးနှုတ်သောသခင်သည် အသက်ရှင်၍ နောင်ကာလ၌ မြေမှုန့်အပေါ်မှာ ပေါ်လာတော်မူမည်။" ဟေရှာယ၊ ၅၃း၁၀ တွင်လည်း " ထာဝရဘုရား သည် သူ့ကို နှိပ်စက်ခြင်းငှာ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည် အပြစ်ဖြေသော ယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ၊ အမျိုးအနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ အသက်တော်လည်း ရှည်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏ အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။" ဟုဖေါ်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှု၏ကြိုတင်ပြောစကားများ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်က သူသည် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သေလွန်ပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့် အကြောင်းများကို ထင်ရှားစွာ ကြိုတင်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ " ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ သုံးရက်နေရသကဲ့သို့၊ လူသားသည် မြေကြီးထဲမှာ သုံးရက် နေရလတ္တံ။ (မဿဲ ၁၂း၄၀) " " ထိုမှတပါး ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားရမည်။ လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့လက်၌ များစွာခံရမည်။ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းခံရမည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများကို ထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၆း၂၁)" " တောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါ ယေရှုက လူသားသည် သေခြင်းမှမထမြောက်မှီ တိုင်အောင်၊ သင်တို့ ယခုမြင်သောရူပါရုံကို အဘယ်သူအားမျှ မပြောကြနှင့်ဟု တပည့်တော်တို့ ကို ပညတ်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၇း၉)" (ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် မာကု ၈း၃၁၊ မာကု ၉း၉၊ ယောဟန် ၂း၁၉-၂၁) ဤကျမ်းပိုဒ်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မဟုတ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားပေသည်။ တမန်တော်များ၏သွန်သင်ချက်များ " ထိုသူကို သေခြင်းဝေဒနာသည် အစဉ် ချည်နှောင်ချုပ်ကိုင်၍ မဖြစ်နိုင်သည်နှင့်၊ ထိုဝေဒနာကို ဘုရားသခင်သည်ချွတ်ပယ်၍ ထမြောက်စေတော်မူပြီ။ . . (တမန်တော် ၂း၂၄-၃၆)" " ဘုရားသခင်သည်လည်း သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ ဂါလိလဲပြည်မှ ယေရုရှလင်မြို့သို့ နောက်တော်၌ လိုက်သောသူတို့အား နေ့ရက်များစွာ ကိုယ်ကို ထင်ရှားပြ တော်မူ၏။ . . . (တမန်တော် ၁၃း၃၀-၃၇)" " အကြောင်းမူကား ခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့် လောကီသားတို့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် ညီလျော်စွာ စစ်ကြောစီရင်မည့်နေ့ရက်ကို ချိန်းချက်တော်မူပြီ။ ထိုသူကို သေခြင်း မှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောလူတို့အား ယုံလောက်သောသက်သေ ကို ပြတော်မူပြီဟု ပေါလုဟောပြော၏။ ( တမန်တော် ၁၇း၃၁)" တမန်တော်များ၏ သွန်သင်ချက်များ၌လည်း သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အထူးအလေးပေး ဟောပြောထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမှန်တကယ် ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းမရှိသော သခင်ယေရှုအကြောင်းကို မိမိအသက်အသေခံသည်အထိ လိမ်ညာပြောဆိုမည့်သူ ရှိပါမည်လား။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ အခြားအထောက်အထားများ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသောအထောက် အထားများကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။ သခင်ယေရှုအား မြှုပ်နှံသောသင်္ချိုင်းဂူတွင် သခင်ယေရှု၏ ရုပ်ကလပ်ကို မတွေ့။ လွတ်လပ်နေသည်။ ထို့ပြင် သခင်ယေရှုအား ပတ်စီးခဲ့သော အ၀တ်များလည်း လက်ရာမပျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ (လုကာ၊ ၂၄း၃ ။ ယော၊ ၂၀း၆-၇) များစွာသောလူများလည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ ကိုယ်ထင်ရှားပြခြင်းကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောယေရှုကို မြင်တွေ့မည်ဟု မျှော်လင့်မထားခဲ့သောကြောင့် သခင်ယေရှုကို ပြန်မြင်ရသောအခါ တစ္ဆေဟုထင်၍ ကြောက်လန့်သေးသည် (လုကာ၊ ၂၄း၂၅)။ ဤသူများထဲတွင် ပေတရု (လုကာ၊ ၂၄း၃၄) တပည့်တော်နှစ်ယောက် (လုကာ၊၁၃း၁၃-၃၂) တပည့်တော်(၁၀)ယောက် (ယော၊ ၂၀း၁၉) တပည့်တော်(၇)ယောက် (ယော၊ ၂၁း၁-၁၄)၊ ယာကုပ်(သခင်ယေရှုညီတော်) (၁ကော၊၁၅း၇)၊ မာရိ (ယော၊ ၂၀း၁၆)၊ အမျိုးသမီးများ(မဿဲ၊ ၂၈း၉-၁၀)၊ သောမ (ယော၊ ၂၀း၂၆-၂၉)၊ ငါးရာမကသောလူများ (၁ကော၊ ၁၅း၆)နှင့် ပေါလု(တ၊ ၉း၅ ။ တ၊၂၆း၁၆ ။ ၁ကော၊ ၉း၁)။ ဤနေရာတွင် ရှင်ပေါလုသည် သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်၍ ကောင်းကင်သို့တက်ကြွပြီး နောက်ပိုင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော အရှင်ယေရှုကို ဖူးတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော သခင်ယေရှုသည် ကိုယ်ခန္မာအစစ်ဖြင့် ရှင်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များ၏ စိတ်အာရုံ လွဲမှားခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင်က ငါသည် စုန်းတစ္ဆေမဟုတ်၊ ငါ့မှာ သွေးသားရှိ၏။ ဟု အစာစားပြခဲ့သည် (လုကာ၊ ၂၄း၃၉-၄၃)။ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်၏ အခြေခံကျသော ခံယူချက်ဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟူသောစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သေခြင်းမှ တဖန် ပြန်ထလာခြင်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခန္မာကိုယ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ကိုယ်ခန္မာသည် သေခြင်းမှ အမှန်တကယ် ထမြောက်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် သေသည်မှာ သခင်ယေရှု၏ ခန္မာကိုယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သေခြင်းမှ အမှန်စစ်စစ် ထမြောက်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတရံ ကျွန်တော်တို့သည် သခင်ယေရှု အသက်ရှင်ကြောင်းကို သိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဦးနှောက်အသိရှိပြီး နှလုံးသားအသိမရှိ ဖြစ်တတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သခင်ယေရှု ၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကျမ်းအထောက်အထားအရသာ ယုံကြည်သက်ဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် သခင်ယေရှုသည် အသက်ရှင်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း နှလုံးသား မှသိကျွမ်းခြင်း လိုအပ်နေသေးသည်။ တမန်တော်ရှင်ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ယေရှုကို မသိကျွမ်းခင်က တံငါအလုပ် ပြန်လုပ်နေသော်လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်သောယေရှု ကို ဖူးတွေ့ရသောအခါ မာတုရအဖြစ် ပေးဆပ်သည်အထိ အသက်ရှင်သောယေရှုအကြောင်း သက်သေခံရဲလာသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ခရစ်ယာန်များကို မုန်းတီး၍ လိုက်လံသတ်ဖြတ်နေသူ ဖြစ်သော်လည်း အသက်ရှင်သောယေရှုကို ဖူးတွေ့ရသောအခါ "ငါ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပြုစုသော အရာရှိသမျှတို့ကို ရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကြောင့် ငါထင်မှတ်၏ "ဟု ခံယူကာ အသက်ရှင်လာသည်။ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းမဟုတ်။ သခင်ယေရှုသည် အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူအသက်တာ၌ ကိုယ်တိုင်ခံစားရ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရှုသူမိတ်ဆွေ သင့်အတွက် သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် လိမ်လည်မှု သက်သက်လော။ အမှန်ဖြစ်ရပ်လော။ ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ သင်တို့သည် ယုံကြည်သော်လည်း အကျိုးမရှိ။ (၁ကော၁၅း၁၄ )